27 / 07 / 2021 27 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 662 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Agatha Harkness, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ကြောကျတိုငျ, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, သဘော, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
ပထမ ဦး ဆုံးသော Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီး Marvel Cinematic Universe သည်ဤတွင်နောက်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ သို့သော် p တစ်ခုဆီသို့အလွန်ပြင်းထန်သောဘက်လိုက်မှုရှိသည်artအတွက် icular ဇာတ်ကောင် 71031 Marvel စတူဒီယို.
အသေးစားဓာတ်ပုံ (၁၂) ခုအနက်မှလေးခု (၎င်းသည်အိမ်၌ကစားနေသူများအတွက်စီးရီး၏သုံးပုံတစ်ပုံလုံး) တစ်နည်းနည်းဖြင့် Captain America ကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ Marvel အစုံ။ ကောင်းပြီ၊ မရေမတွက်နိုင်အောင်မများပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ရေတွက်ခဲ့လို့ပါ၊ လက်ရှိ Captain America အသေးစားရုပ်ပုံများစုစုပေါင်း - မတိုင်မီက 71031 Marvel စတူဒီယို - ထိတ်လန့်ဖွယ် 19 မှာထိုင်တော်မူ၏
၎င်းတွင်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်သုံးဆင့်ကို ဖြတ်၍ သူ၏ရုပ်ရှင်ဝတ်စုံအပေါ်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုများပါဝင်သည် Marvel Cinematic Universe အပြင်တောက်ပ။ ကာတွန်းအခြေပြု ၀ တ်စုံများ classic Scuba Captain America?)၊ San Diego Comic-Con သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများနှင့် Mighty Micros အသွင်အပြင်ပင်ရှိသည်။ တစ် ဦး DUPLO ပုံနှင့် nanofigure statuette အတွက်ပစ်နှင့် Cap အားဖြင့်တော်တော်လေးကောင်းစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် Lego အတိတ် - ဆယ်စုနှစ်နီးပါးကျော် Group မှ။
စတိဗ်ရော်ဂျာကိုတွေ့မြင်ဖို့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ် 71031 Marvel စတူဒီယိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာမယ့်စီးရီးတွေဟာ MCU ရဲ့ပထမဆုံးလေးစီးကိုအခြေခံထားလို့ပဲ Disney+ show: အကယ်၍ … ?, စွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီစစ်သား၊ Loki နှင့် WandaVision ။ သို့သော်ခဏပင် classic ထိုစီးရီးများထဲမှမည်သည့်ခေါင်းစီးတွင်မဆို Cap မရှိပါ Lego အုပ်စုသည် Captain America မျိုးကွဲသုံးမျိုးကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ထပ်မံဖြည့်တင်းနိုင်ပြီးအခြား minifigure တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆမ် Wilson ရဲ့ Captain America ရှိတယ်။ ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်; ဗိုလ်ကြီးဂarter (အခြေခံအားဖြင့် Captain America, ဒါပေမယ့်ဗြိတိသျှ); နှင့် Bucky Barnes (သို့မဟုတ် The Winter Soldier) သည်ပင် Falcon နှင့် Winter Soldier ကိုကြည့်ပြီးနောက်မှသာထင်ရှားလာသည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက် Captain America ဒိုင်းလွှားကိုသယ်ဆောင်နေသည်။
အိုကေ၊ အလုံအလောက်တရားမျှတတဲ့၊ အဲဒီဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုပထမလေးလုံးမှာပြသထားတယ် Disney+ ပြပွဲနှင့် Lego Group မှသာထင်ဟပ်နေသည် Marvelကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည့်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ၏အမွေ။ Captain C အပါအ ၀ င်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများရှိခဲ့သော်လည်းထိုသို့ခံစားခဲ့ရသည်arter, စarticularly သူမပြီးသားသြဂုတ်လရဲ့လာမယ့်ရဲ့ပေးထား 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper.
အသေးစိတ်နှင့်တိကျသော Peggy ဗားရှင်းကိုထိုသို့သယ်ဆောင်ပါ Marvel mech set သည်က) ၎င်း၏အလိုရှိမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခ) ပိုမိုလတ်ဆတ်သော၊ 71031 Marvel စတူဒီယို။ ၎င်းသည်ယခုဆိုလျှင်စီးရီးများသည် အကယ်၍ What If ... ? သို့သာလျှင်လေးလံစွာလေးလံသော်လည်း Captain C ကိုလဲလှယ်သည်artAgatha Harkness (တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ WandaVision အလှမယ်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်) ကအရာရာကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ်။
ဒါတွေအားလုံးကတော့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအမေရိကတိုက်ကို ဦး တည်နေတဲ့ Captain နဲ့ကျန်ခဲ့တယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး 71031 Marvel စတူဒီယို။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုသူတို့အားလုံးကိုဝယ်ပြီး ၀ ယ်တာကိုတားဆီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ Marvel CMF စီးရီး၊ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်။
နောက်ဆုံးပေါ်မျက်စိကန်းသောစီးရီးများထိမှန်သည့်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စ၍ Caps (နှင့်ကျန်) အားလုံးကိုသိမ်းယူနိုင်လိမ့်မည် LEGO.com, Lego စတိုးဆိုင်များနှင့်ကောင်းသောလက်လီအရောင်းဆိုင်များ။
← LEGO MASTERS သည်တရုတ်နိုင်ငံကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်
ဂျိုးဂျိုနပ်စ်နှင့်ဆိုဖီတာနာတို့သည် LEGO အဆောက်အအုံကိုပိတ်ဆို့ထားသည် →